အထွေထွေ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
Samsung မိုဘိုင်းဖုန်း user များအတွက် အသုံးဝင်မယ့် လျှို့ ဝှက်ကုဒ်နံပါတ် များကို ရှာဖွေ မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။
*#0523# – *#8999*523# : Display Contrast
*#9998*324# – *#8999*324# : Debug Screen
*#9998*842# – *#8999*842# : Vibration Test
*#9998*289# – *#8999*289# : Alarm Beeper – Ringtone Test
အချို့ ကုဒ်များ မှားယွင်းနိုင်သဖြင့် သတိထား အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။
This entry was posted on March 17, 2013, in မှတ်စုမှတ်ရာများ, အထူးကဏ္ဍ, အထွေထွေ, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
ကျမ ဘယ်တော့မှ ကုလားလို့ မခေါ်ဘူး။
” ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းချက် “
အမေစု ရဲ့ America ခရီးစဉ် မှာ Los Angeles ကို လာတုန်းက အမည် မဖေါ်လိုသူ မြန်မာပြည်က ထွက်လာတဲ့ ကုလား တစ်ဦး က စာနဲ့ မေးခဲ့တဲ့ မေးခွန်း တစ်ခု ကို သူမ က ယေဘုယျသဘောမျိုးနဲ့ ဖြေခဲ့တာ တစ်ခုရှိပါတယ်။
အမေးအဖြေအပြည့်အစုံဟာ ဒီ ပုံထဲက စာတွေအတိုင်း ပါဘဲ။
ဒါကို ခု တစ်လ ကျော်ကြာတော့မှ လူတစ်စုကနေပြီးတော့
(ကုလား ကို ကုလားလို့ ခေါ်ရင် မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုလိုက်ပါတယ်) လို့
ကုလားတွေကို နာကျည်းနေတဲ့ ရိုးလွန်းတဲ့ မြန်မာတွေ အမေ့အပေါ် နားလည်မှု လွဲသွားအောင် စနစ်တစ်ကျ ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိနဲ့ လူအကြည်အညိုပျက်အောင် ကြံစည်အားထုတ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒါ မျိုး ကို Character Assasination လို့ ခေါ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်ကို အတိုက်ခိုက် ခံရကထဲက ကျွန်တော် ရှင်းပြဖူးပါတယ်။
သိပ်ရွံမုန်းဖို့ ကောင်းတဲ့ အောက်တန်းကျတဲ့ လုပ်ကြံမှုပါဘဲ။
ဒါကို အကြောင်းရင်းမှန်အားလုံး သေချာ မသိတဲ့ သူတွေကလဲ အမေစု ကို လှောင်ပြောင်စော်ကားပြီး
ကုလား ကို ကုလားလို့ ခေါ်ရင် မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ ဖြစ်မယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောတယ် ဘာညာတွေ စတင်ရေးသားလာကြသလို
ဒီချုံကိုထွင်ထားတဲ့သူ တွေကလဲ ဒီလို မြန်မာတွေရဲ့ လိုရာ ဆွဲတွေး အယုံလွယ်တဲ့ သီအိုရီ ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အမေ့ကို စတင် တိုက်ခိုက်လာတာတွေဟာ ကျွန်တော် လုံးဝ သည်းမခံနိုင်တော့တဲ့ အနေအထားကိုရောက်လာလို့ ကျွန်တော် ချစ်တဲ့ အမေစု နဲ့ အမှန်တရားကို ကာကွယ်ဖို့ ကျွန်တော် ရှင်းပြပါ့မယ်။
အဲ့ဒိ အောက်တိုဘာ (၂) ရက်နေ့ က အမေစု ကို ပုရိသတ်က မေးခွန်းတွေ စာနဲ့ ရေးမေးပြီး အမေစု က အချိန်ရသလောက် အလျင်းသင့်သလို ပြန်ဖတ်ရင်းဖြေကြားတဲ့ စာတွေထဲမှာ အမေစု ကို ကုလား ရခိုင် အရေးအခင်း တိုင်းရင်းသားတွေ အရေးအခင်းတွေ မြန်မာ မွတ်ဆလင် ကိစ္စ တွေ နဲ့ပါတ်သက်ပြီး ပညာစမ်းသလိုလို စိန်ခေါ်သလိုလို မေးထားတဲ့ မေးခွန်းတွေလဲ ပါခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်သူတွေ ဘာကြောင့် ရေးပြီး မေးခဲ့တဲ့ မေးခွန်းတွေ ဆိုတာလဲ ကျွန်တော် တပ်အပ်သေချာ သိပါတယ်။
ကျွန်တော် လက် နဲ့ မျက်စေ့တွေက အမေ့ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးနေရင်း သူပြောသမျှ အကုန်လုံး နားက နားထောင်ပြီး တစ်လုံးမကျန်မှတ်ထားပါတယ်။
သူပြောသွားတာ ဒီ အထက်ပါ ပုံထဲက စာတွေ အတိုင်းပါဘဲ။
စာ အသေးစိတ်ကို အောက်ဆုံးမှာ ပြန်ဖတ်ကြည့်နိုင်အောင် ထပ်ထည့်ပေးထားပါတယ်။
ရှင်းရှင်းပြောရရင် အဲ့ဒိတုန်းက ကချင် တွေ ချင်းတွေ အုပ်စုတွေထဲမှာ အမေစု က နိုင်ငံတကာ နဲ့ ပြောဆိုခဲ့တဲ့ စကားတွေထဲမှာ သူတို့ ဒေသ တွေ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ထည့်မပြောပေးလို့ ဆိုပြီး အမေစု ကို ဆန္ဒပြမယ်ဆိုတဲ့ အသံတွေ ထွက်နေတာပါ။
ဒါကိုလဲ အမေ့ကို သိအောင် ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ ကြိုပြောပြထားလို့ အမေစု က သူ စင်ပေါ် စစရောက်ချင်းဘဲ ကဲ ကျမ ကို ဆန္ဒ ပြမယ် ဆိုတဲ့သူတွေရှိတယ် ဆို ဘယ်မှာလဲ ပြလေ ပြပါ ရပါတယ် လို့ ခပ်ပြုံးပြုံးဘဲ စိန်ခေါ်လိုက်တော့လဲ အဲ့ဒိလူစုတွေ ငြိမ်ကုတ်နေခဲ့ပါတယ်။
ထားပါတော့လေ ကုလား ဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်ကိစ္စ နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး မေးလာတဲ့အခါ အမေ ပြောချင်တာက နှိမ်တတ်တဲ့ မြန်မာတွေ ရဲ့ နှိမ်ပြီး သုံးနှုံးပုံ နှိမ့်ချခေါ်ဝေါ်တတ်တဲ့ Attitude ကိုဘဲ ဆိုလိုတာပါ။
” စောက်ကုလား ” လို့ခေါ်တာမျိုးတွေ
(အမေစု က ” စောက် ” ဆိုတဲ့ စကားလုံး ကို ” သောက် ” လို့တောင် ဘယ်တုန်းကမှ မသုံးစွဲတတ်လို့ ထည့်မပြောတဲ့အတွက် လူတွေ နားမလည်နိုင်ဖြစ်စရာ ဖြစ်နေတာပါ)
” ဟိုကုလားရော ”
” ဟေ့ကောင် ကုလား ” လို့
နှိမ့်ချခေါ်ဝေါ် သုံးနှုန်းတာမျိုးတွေ ကိုပြောတာပါ။
ကုလား လူမျိုးတစ်ယောက်ကို ကုလား လို့ ခေါ်တာ ရိုင်းပျတာ လုံးဝ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ မသိနားမလည် မေ့လျော့နေရလောက်အောင် ကျွန်တော်တို့ အမေ မကြောင်ပါဘူး မဒူပါဘူး။
အမေ ဆိုလိုတာက နှိမ်တတ်တဲ့ မြန်မာတစ်ချို့ ရဲ့ နှိမ်ပြီး သုံးနှုံးပုံ ကို ဘဲ ပြောတာပါ။
ကုလား ကို ကုလားလို့ ခေါ်တာဟာ
ကရင် ကို ကရင် လို့ ခေါ်သလို
ကချင် ကို ကချင် လို့ ခေါ်သလို ဘဲ
ဘာမှ ထူးခြား ရိုင်းပျနေတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် တို့ ထက် အများကြီး ပညာတတ်တဲ့ အမေစု ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။
ဒီတော့ တကယ်တမ်း အရေးကြီးတာက ဒီ စာကို အခမ်းအနားပြီးတာ တစ်လကျော်မှ ထရေးတင်တဲ့ သူ ရဲ့ မူရင်း အဓိက ရည်ရွယ်ချက် ကဘာကြောင့်ပါလဲ ?
ဒါ သက်သက်မဲ့ ယမယ်ရှာပြီး အမေစု ကို မြန်မာ တွေ နဲ့ ရန်တိုက်ပေးဖို့ ဖွလိုက်တာမှန်း သိသာထင်ရှား လွန်းနေပါတယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော်တို့ အမေစု ကို ခုလို
ခပ်ထုံထုံ နလပိန်းတုံး ကျပ်မပြည့်တဲ့ ကလေးကလား (LOW IQ) TECHNIQUE တွေ
RETARTED IDEA တွေ နဲ့ ဘယ်တော့မှ လာမတိုက်ခိုက်ပါနဲ့
ဘယ်တော့မှ လူမျိုးရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး အမေ့ကို မြန်မာ လူမျိုးတွေနဲ့ ပြန်ရန်တိုက်ပေးဖို့ မလုပ်ကြံပါနဲ့။
အမေစု မှာ ဥာဏ်ရှိတဲ့ သားတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
အဲ့ဒိ သားတွေ တစ်ကောင်မှ ငြိမ်ခံနေမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပြင်းထန်စွာ သတိပေးလိုက်တယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ဒီစာထဲမှာလဲ ကျွန်တော် ကုလား ကို ကုလား လို့ ဘဲ သုံးနှုံးထားပါတယ်။
မကျေနပ်ရင် ကျွန်တော့်ကိုလဲ မြန်မာ လို့ ကြိုက်သလောက် ခေါ်ပါ။
လုံးဝ စိတ်ဆိုးမည် မဟုတ်ပါ။
WHENEVER YOU’VE COME ACROSS A STRANGE OR UNLIKELY SITUATIONS IN LIFE,
DO NOT ONLY FOCUS ON ” WHAT “.
ALWAYS FOCUS ON ” WHY ” FIRST.
THAT’S WHAT WISE MEN DO.
ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေ သိပ်ကို များပါတယ်။
မိဘ၊ ဆရာသမားများက အစ အဲဒီလိုလုပ်တာ မကောင်းဘူးလို့ တားမြစ်တာမျိုး အင်မတန်နည်းတဲ့အတွက် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို တရုတ်၊ ကုလား၊ ကရင်စသဖြင့် လူမျိုးရေးနှိမ့်ချ စော်ကားဖို့ ဘယ်သူမှ ၀န်မလေးကြတာ ယနေ့အထိ တွေ့နေရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသွားဖို့ စိတ်ကူးပါသလဲ။
(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှ ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်း)
အဲဒီဟာ တော်တော့ကို ဟုတ်တယ်။
ဒါက ပညာရေးမှာ ကျောင်းကကို သင်သွားရမှာ။
ကျမတို့ မိတ်ဆွေတွေက ဒီလို ကုလားလို့ခေါ်တာ မကြိုက်ဘူး ဆိုတာ ကျမ သိတယ်။ ကျမ ဘယ်တော့မှ မခေါ်ဘူး။
ကျမက အိန္ဒိယမျိုးနွယ်လို့ခေါ်ရင် ခေါ်တယ်။ မူစလင်မ်လို့ ခေါ်ရင်ခေါ်တယ်။ ဘာသာရေးအရ ဟိန္ဒူလို့ခေါ်ရင် ခေါ်တယ်။
ဒီဘာဖြစ်လို့ သူတပါးမကြိုက်တဲ့ အသုံးအနှုန်းကို သုံးကြရတာလဲ။ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့အသုံးအနှုန်းကို သုံးရင် ကိုယ်ဘယ်လို ထိခိုက်မလဲ၊ ကိုယ်ချင်းစာတဲ့စိတ် ရှိသင့်ပါတယ်။
အဲဒီလို ကျမကတော့ အားလုံးကို ကိုယ်ချင်းစာတဲ့စိတ် ရှိစေချင်တယ်။
နောက်ပြီးတော့ တစ်ပါးသူကို စော်ကားပြီး ပြောတာဟာ ကိုယ့်သိက္ခာကျတယ်ဆိုတာလဲ နည်းနည်းလေးတော့ စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။
ဒါသိက္ခာမဲ့တဲ့သူတွေသာ သူများကို စော်ကားပြီးတော့ ပြောတာ။
အဲဒီလို မသင်တာဟာ မိဘတွေကလဲ မသင်တာပါတယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကလဲ မသင်တာပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကျမတို့ကတော့ ဒါကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေမှာကို ထည့်ပြီးတော့ ကိုယ်နဲ့ ဘာသာရေးမတူတာ၊ လူမျိုးမတူတာ၊ အတွေးအခေါ်မတူတဲ့သူတွေကို လေးစားသင့်တယ်ဆိုတာတော့ ထည့်ပြီးတော့ကို သင်ရမယ်လို့ ကျမ ဒီအတိုင်းပဲ မြင်ပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့လဲ ဥပဒေအရလဲ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကို တားမြစ်တာလဲ ရှိရမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဥပဒေကြီးနဲ့ပဲ မပြီးဘူး။ စိတ်ကို ပြောင်းယူရမှာ။
ကျမ ခဏ၊ ခဏပြောတယ်၊ ကျမတို့ရဲ့ တော်လှန်ရေးဟာ စိတ်ဓါတ်တော်လှန်ရေး။ နောက်ဆုံးကျတော့ စိတ်ဓါတ်တော်လှန်ရေးပါ။ ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေး မဟုတ်ပါဘူး။
အစိုးရစနစ်တစ်ခုပြောင်းရုံနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ဓါတ်ကို မပြောင်းလို့ရှိယင် ဘယ်မှ ကျမတို့ ရောက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ စိတ်ဓါတ်ပြောင်းနိုင်မှ တိုးတက်မှု ရှိမှာပါ။
(FROM OCT 2ND, 2012 LOS ANGELES EVENT)
This entry was posted on January 24, 2013, in မှတ်စုမှတ်ရာများ, အထူးကဏ္ဍ, အထွေထွေ.	Leaveacomment
Aye Chan Mon‘s photo.
စာပေဗိမာန်က ထုတ်သော စာအုပ်တစ်အုပ်တွင်“ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးအား ရှိခိုးပါ၏’’ ဟု တွေ့ လိုက်ရရာကျွန်တော် ဤဆောင်းပါးကို မရေးပဲမနေနိုင်တာ့။
ခင်ပွန်းဆယ်ပါးကို အစောဆုံးရေတွက်ပြခဲ့သည့်တောင်တွင်းမင်းကျောင်းဆရာတော်၏ ကန်တော်မင်းကျောင်းမေတ္တာစာ အဖြေကျမ်းတွင်”မပြစ်မှားရာသော ခင်ပွန်းတို့ ကား
(၁၀) အဝတ်အစား ၊ အသုံးအဆောင်ကိုပေးသသူ
ဟူ၍ တစ်ကျိပ်တည်း-ဟုတွေ့ ရသည်။ နောက် ဆရာတို့ သည်ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါး နှင့် ပတ်သက်လျှင် ထိုကျမ်းကိုကိုးကားကြသည် ထင်ပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့် ဆရာတော် မင်းပူးဦးသြဘာသ ၏တေမိယဇာတ်တော်ကြီးတွင် “ဤလောက၌ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတစ်နေ့ မခြား ပွားစေအပ်သောသူကား
(၂) ပစ္စေက ဗုဒ္ဓါ
(၃) ကိလောကုန်ပြီးသော ရဟန္တာ
(၄) မြတ်စွာဘုရားတို့ ၏ လက်ယာရံ၊လက်ဝဲရံဖြစ်သော
(၇) အရွယ်ကြီးခြင်း ၊ အမျိုးမြတ်ခြင်း ၊ ပညာကြီးခြင်း
သီလသမာဓိရှိခြင်း အစရှိသော ဂုဏ်တို့ ကြောင့်
(၈) အကျိုးအကြောင်းကို ဆုံးမသွန်သင် ပဲ့ပြင်စေတတ်သောသူ
(၉) ထမင်းအဖျော် ၊ အိပ်ရာနေရာ ၊ အဝတ်ပုဆိုး စသည်
တစ်စုံတစ်ခု ပစ္စည်းအာမိသတို့ ကို ပေးဖူးပေသောသူ
(၁၀) သူခပ်သိမ်းတို့ ကို ကိုသိုလ်တရားပွားများစေခြင်းငှာ
ဟု တွေ့ ရပါသည်။
ထိုစကားသည် ”အဆွေခင်ပွန်းကို မပြစ်မှားသောသူသည်အစားအစာပေါများ၏။ အရပ်တစ်ပါးသို့ ရောက်သော်လည်းစီးပွားချမ်းသာ မယုတ်။ သူခပ်သိမ်းတို့ ၏မှီခိုအားထားရာဖြစ်မည်”ဟူသော မူရင်းစကားကို ချဲ့ ထွင်ဆိုထားသော စကားဖြစ်ပါသည်။
ခင်ပွန်းဆယ်ပါး ရေတွက်ပုံမှာ တောင်တွင်းနှင့် မင်းပူး အကွဲအလွဲမရှိပါ။
ဗုဒ္ဓါ ပစ္စေက ဗုဒ္ဓါ စ၊
မာတာ ပိတု ဂုရု သတ္တာ
ဓမ္မဒေသနာ စ ဒါယကာ။
အဟဲ ဝန္ဒာမိ သဗ္ဗဒါ။
ခင်ပွန်းဆယ်ပါးရှိလျှင် ခင်ပွန်းဆယ်ပါး ရှိခိုးဂါထာကလေးလည်းရှိမှကောင်းမည်။ဤသို့ စိတ်ကူးမိသော ပညာရှိသည် ခင်ပွန်းဆယ်ပါး ရှိခိုးလင်္ကာကို အလျင်အမြန် သီဖွဲ့ ခဲ့လိမ့်မည်။
ခင်ပွန်းဆယ်ပါး ရှိခိုးဂါထာသည် ခင်ပွန်းဆယ်ပါး အယူအဆကိုအသေအချာ အသိအမှတ်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခိုင်ခံ့သည်ထက်ခိုင်ခံ့အောင် ပြုလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ ခင်ပွန်းဆယ်ပါးကို ငါးပါးသီလကဲ့သို့ ၊ ဂုဏ်တော်ကိုးပါးကဲ့ သို့ တိကျသော အရေအတွက်ရှိအောင် လုပ်လိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်နေပြန်ပါသည်။
ခင်ပွန်းဟူသည် “ပွန်းပွန်းတီးတီး ခင်မင်ရမည့်သူ” ဟူ၍အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။မိန်းမတို့ အတွက် ပွန်းပွန်းတီးတီး (လက်ပွန်းတတတီး)ခင်မင်ရမည့်သူမှာလင်ယေက်ျားဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့်လင်ယေက်ျားကို ခင်ပွန်းဟုခေါ်သည်။အကယ်၍ မောင်နီသည် မောင်ဖြူအတွက် ခင်ပွန်းဖြစ်သည်။အမှန်တော့ အရင်းနှီးဆုံးသော မိတ်ဆွေကို ခင်ပွန်းဟု ခေါ်ခဲ့ကြဟန်ရှိပါသည်။
ခင်ပွန်းဟူသော ဝေါဟာရသည် မြန်မာစကား ပီပီသသ နှင့် ထိမိ၍ လှပသောဝေါဟာရဖြစ်ပါသည်။ သို့ သော် သူသည်လည်းရွေ့ လျားပြောင်းလဲမှုဓမ္မသဘောကို လွန်ဆန်နိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ စာပေနှင့် ဘာသာစကားတွင်သူယူခဲ့သော နေရာတော်တော်များများကို “မိတ်ဆွေ” အားပေးလိုက်ရပါသည်။“မိတ်ဆွေ” နှင့် ပူးတွဲကာ “အဆွေခင်ပွန်း” ဟုသုံးစွဲကြပါသေးသည်။သို့ သော် “ခင်ပွန်း” တဖြည်းဖြည်းအမှောင်ဘက်ရောက်သွားသည်။“လင်ယေက်ျား” သည် “ခင်ပွန်း” ကိုနောက်ဆုံးကယ်တင်သူဖြစ်ပါသည်။
ဇနီးမယားတိုင်းက လင်ယေက်ျားကို မိမိ၏ ခင်ပွန်းအဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။ထိုအခါ အမျိုးသမီးတို့ ၏အမျိုးသား မိတ်ဆွေများကို “ခင်ပွန်း” ဟုမသတ်မှတ်ရဲတော့။ ဤသို့ ဖြင့် ခင်ပွန်းသည် ကျပ်တည်းသော ဝေါဟာရဖြစ်လာခဲ့သည်။ အသုံးနည်းသော ဝေါဟာရ ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။အသုံးနည်းသော မူရင်းအဓိပ္ပါယ်လည်း ငုပ်လျှိုးကွယ်ပျောက်ခဲ့ရပါသည်။
သတ္တနိပါတ် ၊ အဂုင်္တ္တိုရ်တွင် ခင်ပွန်းအင်္ဂါ ခုနှစ်ပါး ပြဆိုထားသည်။ယင်းတို့ မှာ –
၁ – ပေးနိုင်ခဲသော ဝတ္တုကိုပေးခြင်း
၂ – ပြုနိုင်ခဲသော အမှုကိုပြုခြင်း
၃ – သည်းခံနိုင်ခဲသော အမှုကို သည်းခံခြင်း
၄ – လျှို့ ဝှက်သောအမှုကို လျှို့ ဝှက်ခြင်း
၅ – ထင်စွာပြုအပ်သောဂုဏ်ကို ထင်စွာပြုခြင်း
၆ – ဘေးရန်ရှိသောကလ မစွန့် ခြင်း
၇ – ဥစ္စာမရှိ ကုန်ခန်းခဲ့သော်လည်း မထီမဲ့မြင်မပြုခြင်း
စိတ်ထားမြင့်မြတ်သူတို့ သာ အဆွေခင်ပွန်းကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။များစွာသော သူတို့ သည် အဆွေခင်ပွန်းတို့ ၏ကျင့်ဝတ်အင်္ဂါများနှင့်ပြောင်းပြန်ကျင့်ကြပါသည်။ ပေးနိုင်ခဲသော ဝတ္တုကို မပေး။
မယူသင့်သော ဝတ္တုကိုပင် အရယူချေသးသည်။ထိုသို့ သော ပြောင်းပြန်အကျင့်များကြောင့် ခင်ပွန်း၏ အဓိပ္ပါယ်ကလည်းတလွဲဆောင်လာသည်။
မှန်ပါသည် ။ မုံရွေးဆရာတော်၏ မုံရွေးမှတ်စုတွင် “သူ့ ကိုခင်လျှင်ကိုယ်ကပွန်းသောကြောင့် ခင်ပွန်း ခေါ်ကြကုန်၏” ဟု တွေ့ ရပါသည်။ယင်းအဓိပ္ပါယ်ဖြင့် ခင်ပွန်းဆယ်ပါးကို နားလည်မှုလွဲခဲ့သော် … ။
မဖြစ်သင့်တာကို မတွေးဘဲနေတာ ကောင်းပါသည်။
သွေးတော်စပ်မှုကြောင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သည် မဟုတ်။ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် နားလည်မှုယူ၍ ခင်ပွန်းဖြစ်သည်မဟုတ်။ခင်ပွန်းကျင့်ဝတ် ရှိသူတိုင်းကို ခင်ပွန်းဟု သတ်မှတ်နိုင်စရာအကြောင်း
တော့ရှိပါသည်။ သို့ ရာတွင် ယင်းသည် ခင်ပွန်းအရေအတွက် သရုပ်သင်္ချာကို ရှုပ်ထွေးစေပါသည်။ ခင်ပွန်းဆယ်ပါး၊ ခင်ပွန်းဆယ့်နှစ်ပါး၊ခင်ပွန်းအပါးနှစ်ဆယ် စသည်ရေတွက်၍ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ရေတွက်၍မရဟု ဆိုလာလျှင်လည်း ငြင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။သို့ ဖြစ်လျှင် ခင်ပွန်းဆယ်ပါးဟု အဘယ့်ကြောင့် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသနည်း။
ခင်ပွန်းဆယ်ပါး ၊ ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးဟုအဘယ်ကြောင့် သတ်မှတ်ခဲ့သည်ထက်အဘယ်သူက သတ်မှတ်ခဲ့သည်ဟု ဆန်းစစ်ခြင်းကအမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ရာ၌ အထောက်အကူပိုရပေလိမ့်မည်။
ခင်ပွန်းဆယ်ပါးကို ဘုရား သတ်မှတ်ခဲ့သည် မဟုတ်ပါ။ထေရဝါဒ ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး(မြန်မာနိုင်ငံက ဖြစ်နိုင်ပါသည်)ကဥာဏ်တော်ကွန့် မြူးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားဟောမဟုတ်လျှင် ခြွင်းချက်ရှိတတ်သည့် ဓမ္မတာအတိုင်းခင်ပွန်းဆယ်ပါးတွင်လည်း ခြွင်းချက်ရှိနေပါသည်။လုံးတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက “ကျမ်းဂန်၌ ခင်ပွန်းဆယ်ပါး ဟူ၍မလာသော်လည်း ဤဆယ်ပါးကို ခင်ပွန်းမဟုတ်ဟူ၍လည်းမဆိုရ။ အကယ်၍ဤဆယ်ပါးသာ ခင်ပွန်းဖြစ်ခဲ့အဲ့။ မဟာသာဝကတို့ သည် ခင်ပွန်းမဟုတ်ဟုဆိုရန်ရှိ၏။ ထို့ ကြောင့် ခင်ပွန်းဆယ်ပါးမဟုတ်။ အများပင်ဟူ၍မှတ်ရာ၏”ဟု ခြွင်းချက်ကို ထောက်ပြဝေဖန်ကာ အမှန်ကိုတင်ပြခဲ့ဖူးပါသည်။သို့ ရာတွင် သတိမမူမိကြပါ။
မုဂပက္ခမည်သော တေမိဇာတ်တော်တွင် ခင်ပွန်းအားမပြစ်မှားသောသူတို့ အား ရရာသောအကျိုးကို ဟောတော်မူသောအရာ ၁၀ ဂါထာဟူ၍သာကျမ်းဂန်လာသည်။ ခင်ပွန်း ၁၀ ပါးဟူ၍ ကျမ်းဂန်မရှိ။
လုံးတော်ဆရာတော်သည် ခင်ပွန်းဆယ်ပါးကို အခိုင်အမာငြင်းဆိုပယ်ဖျက်ခဲ့ပါသည်။သို့ ရာတွင် ခင်ပွန်း ၁၀ ပါးသည် အဖြူပေါ်ကျလာသောအစွန်းအထင်းတစ်ခုကဲ့သို့ လွယ်လွယ်ဖြင့် ပယ်ဖျက်၍မရပါ။ တင်ကျန်မြဲတင်ကျန်လျက်ရှိပါသည်။ လုံးတော်ဆရာတော်၏ စကားကို သတိမမူမိသောသူတို့ က ထိုအစွန်းအထင်းကို အလှအပဟု မြင်နေကြပါသေးသည်။
အချို့ သောအရာများကို ကန့် သတ်မှကောင်းသည်။ အချို့ သောအရာများကိုမကန့် သတ်မှ ကောင်းသည်။ခင်ပွန်းသည်မကန့် သတ်မှ ကောင်းသောအရာဖြစ်ပါသည်။ထို့ ကြောင့်ဘုရားရှင်က ခင်ပွန်းဆယ်ပါးဟု မကန့် သတ်ခဲ့ပါ။ခင်ပွန်းဆယ်ပါးကို တွေ့ လျှင် အနည်းဆုံး စိတ်ထဲကလက်မခံဘဲ ငြင်းဆိုဖို့ သင့်သည်။အခွင့်သာလျှင် ရှင်းလင်းတင်ပြသင့်သည်။ ခင်ပွန်းကြီး ဆယ်ပါးအား ရှိခိုးပါ၏ …
ဟု အဆန်းအပြားနှင့် တခမ်းတနားကြီး လုပ်မချသင့်ပါ။
ခင်ပွန်းကြီး ၁၀ပါးအကြောင်းရေးပြီးတာနဲ့နောက်ဆက်တွဲလေးရှိသေးတာမို့ မသိသေးသူများ သိရအောင် ကျနော်ကိုယ်တိုင် ရိုက်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် …
ကော်ပီဆိုပေမယ့် အလုပ်တွေများနေတဲ့ကြားက ကျနော်ကိုယ်တိုင် အချိန်ကုန်ခံ စာရိုက်ထားတာပါ …
ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးအကြောင်းနှင့် ဒီ ပိုစ့်လေးကို ဗဟုသုတအနေဖြင့်သာရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အေးချမ်းမွန်မှ ရေးမိရေးရာလေးများ တွင်ဖော်ပြသော သတင်းကို မူရင်းအတိုင်းမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်
This entry was posted on January 5, 2013, in အထွေထွေ.	Leaveacomment
အနောက်တံခါးသခင် သားသားလေး အာရ်ကန်သား မျိုးရိုဟင်ဂျာ
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ မွတ်စလင်က ၁၇၀ ကျော် ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတာက ၇၀ နီးပါး ။ ဒါဟာ အလွန်ကို များတဲ့ လူဦးရေပါ ။
ကျွန်တော်ဘာကြောင့် အဲသလိုလုပ်လဲဆိုတော့ ပြေနေတဲ့ ၀ါးစည်းကိုပြန်စုပေးလိုက်တာပဲ ။
ဒီလိုမျိုးသာ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ မွတ်စလင်တွေကိုအခုလိုမျိုး တစ်စုတစ်စည်းတည်း ကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင် တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့ ။
ဒီလိုမျိုး တစ်စုတစ်စည်း တည်း အမှန်တရားဘက်ကနေ ရပ်တည်ပေးမယ် ဆိုရင်တော့ ပြောနေစရာတောင် မလိုတော့ဘူး ။
အဓိက ကဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အစ္စလာမ် စိတ်ဓာတ်ပျောက်ကွယ်နေခြင်းပဲ ။ အားလုံးက စည်းလုံးနေဖို့လိုတယ် ။ တစ်ခြား ဘာသာဝင်တွေသူတို့ လူတစ်ယောက်ကို ထိရင် ဘယ်လိုတုန့်ပြန်တယ် ဆိုတာ မြင်ဖူးတယ်မဟုတ်လား ။
ကျွန်တော်တို့လည်း မွတ်စလင်တစ်ယောက်ကို ထိရင် သွေးက ပူနေရမယ် ။
လူသတ်ဖို့ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး ။ မတရားအလုပ်မခံရဖို့ တတ်နိုင်သမျှ ပြန်ဖြေရှင်းခိုင်းနေတာ ။
အခုက မွတ်စလင် အယောက် ၁၀၀ အသတ်ခံရလည်း ဘာမှ မနာ ။
မတရား အလုပ်ခံနေရလည်း တစ်ခွန်းမှ မဟရဲ ။ အဲဒီလို မွတ်စလင် ဟာ ရှက်ဖို့ ကောင်းတယ် ။ တမန်တော်မြတ်ရဲ့ နောက်လိုက်တွေဖြစ်ပြီးတော့အစ္စလာမ်ကို လည်း မစောင့်ရှောက်နိုင် ၊ ကိုယ့် မွတ်စလင်ညီနောင်တွေကိုလည်း မကာကွယ်နိုင်ဆိုရင်တော့ ငါဟာ ဘာမွတ်စလင် လဲဆိုတာ ကိုယ့် ကိုကိုယ် ပြန်မေးကြည့်လိုက် ။
အခု တွေ့နေရတာက ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ မွတ်စလင် တွေကို ကူညီဖို့ မပြောနဲ့ မတရား လုပ်ခံနေရတာကိုတောင် မှ ပြန်ပြောဖို့ သတ္တိမရှိကြဘူး ။
ကျွန်တော်က ဒီပေါ်မှာ လာပြီးတော့ အသံကောင်းဟစ်နေတာမဟုတ်ဘူး ။
အပြင်မှာလည်း ကိုယ့် ညီနောင်တွေအတွက် အလုပ်တွေအများကြီး လုပ်ပေးနေတဲ့သူ ။
ကျွန်တော် ရခိုင်ပြဿနာ ဖြစ်တုန်းက ဂိမ်းဆိုင်တစ်ခုမှာ လူငါးယောက်နဲ့ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စကို အငြင်းအခုံလုပ်ဖူးတယ် ။
ကျွန်တော်က အမှန်တရားအတွက်ဆိုရင် ဆွေးနွေးဖို့ ၀န်မလေးဘူး ။
အစ္စလာမ်ကို လာစော်ကားရင်လည်း နေရာမရွေး ကျွန်တော် ဖြေရှင်းနိုင်တယ် ။
အဲဒီလို သတ္တိမွေးထားကြ ။ မတရား အလုပ်ခံနေရရင် နှုတ်ဆိတ်မနေနဲ့ ။
တတ်နိုင် သမျှ ဖြေရှင်း ကြ ။
သူတို့ အထင်လွဲနေတာကို ကိုယ့်အမှန်တရားကို ဖြေရှင်းဖို့ ကြောက်မနေကြနဲ့ ။
အခုက လူသတ်ဖို့ စည်းရုံးနေတာ မဟုတ်သလို ၀ါဒဖြန့်နေတာလည်း မဟုတ်ဘူး ။ စည်းလုံးကြဖို့ ၊ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ကြဖို့ ၊ ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကို ကူညီကြဖို့ ၊ အမှန်တရား ဘက်ကနေ မားမား မတ်မတ် ရပ်တည် ရဲ ဖို့ကို ပြောနေတာ ။
ကျွန်တော့်ကို မတရား ပြောလာတဲ့ မွတ်စလင် ညီအစ်ကို တွေရှိတယ် ။
အခုကျွန်တော်ပြောနေတာတွေဟာ ခင်ဗျား တို့ ကိုယ်တိုင် ဒုက္ခရောက်မှ သိလိမ့်မယ် ။
This entry was posted on December 19, 2012, in မှတ်စုမှတ်ရာများ, အထွေထွေ.	Leaveacomment
မစ်ရှီဂန်မှပေးသောစာ – ၃၉
မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ –
၁၉၈၈ – ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီး မတိုင်ခင်က အဲဒီ ၇၄-၇၅-၇၆ ထောင်ထွက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေဟာ မဆလ အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး မြေအောက်လှုပ်ရှားမှု UG အလုပ်တွေ ဆက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ UG ပေါက်လို့ ပြန်အဖမ်းခံရတဲ့ သူတွေလည်း အဖမ်းခံရတယ်။
ဆိုပါတော့၊ ၁၉၈၈ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ၂၇ရက်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ဆဲဗင်းဂျူလိုင်ရင်ပြင်မှာ ကျင်းပတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ရဲ့ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် ဗကသ ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းတဲ့ အခမ်းအနားမှာ မ်ိန့်ခွန်းပြောသူ တစ်ဦးကတော့ ဘိုကလေးဦးလှရွှေပါ။ သူဟာ ၁၉၆၂ ဆဲဗင်းဂျူလိုင် တိုက်ပွဲဝင် ဗကသ – တကသ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုလှရွှေပေါ့။
This entry was posted on September 16, 2012, in အထွေထွေ.	Leaveacomment